Masvirire andakaita mukadzi weShamwari yangu tadhakwa pataiona bhora – Vanoda Zvinhu
Masvirire andakaita mukadzi weShamwari yangu tadhakwa pataiona bhora
· Updated June 18, 2014
Varume ndakaipa. Zvakaitika madeko mashura chaiwo. Takange tichiona bhora nezuro reGermany nePortugal kumba kwasahwira wangu. Ndainge ndatenga doro rokudzisa zvedu tichikuza mtambo. Doro rainge rakawanda zvokuti nekwmwire kedu takakasira kuno fast. Mkadzi weshamwari yangu uyo ava nemekore 3 asati abata nhumbu aibika zvake isu tichinwa asi patakange takoriwa akabva auya ndokutanga kuona bhora tese.
Sahwira aiva akongewa too bad nohwekukwata saka akatanga kumanikidza mkadzi wake kuti amwewo nesu. Pasina nguva madam yainge yadumburwa zvokusagona kumira. Uyuwo sahwira ainge anoka saka ndakangomufukidza mucheka wesofa achibva arova flat. Ha, zvinoshura ndeiri, mkadzi wake akanga ava kuimba chaizvo semunhu ainge akoriwa. Pakarira kambo kaya munotidako pafoni yangu iri rington achibva asimuka ndokutanga kurova jaivhi matuzvi chaiwo. Paakapedza akauya ndokuwira pamakumbo pangu ini ndokuti aaah maitire aya ndookuda kusvigwa aya. Mkadzi akaoma uyu varume. Nyama dzake dzakaregedzeka semureza. Ndakamubata semunhu aiitira kuti asawira pasi ndokubva ndagumha zamu, mhaihweeeee, mondo yaaniko? Varume ndakasvira mkadzi uyu. Ndakangozoerekana ndavakukatanura hembe iye achingoshanyarika akumakumbo ake akandimonera achindipina. Nhumbi katanu zamu richibva rangoita samanzuma yauruka danga. Sviriso yangu yainge yavhizuka kare paaitamba.
Dickson ainge akatopakata kare. Ndakangobudisa ndakananga paya chaipo. Zvino manje yangu yakazvipengerwa. Ibanana zvaro rinoti ratsamwa rotarira divi kuleft seraramwa rotanga kusikiza serwaivhi. Rinobuda rimwe zitsinga necheseri uku rinenge kachubhu kebhasikoro. Rinenge zvino razvimba sechitunha chaswera pazuva. Ndakarivhura rakadongorera pasiwo ndaobudisa mazizheve aro. Rinenge chiredzo. Zishondo rakatesvera kumberi sebvumo kuno kwarinotangira roita mazheve anoita soohakira mukati. Yah ndiro chairo randakamupa. Pakundoisa ndakamunzwa achfema seadzipwa.
Akawedzera kuvhura makumbo ndokubva ndashwetedzera kumabvaarima. Yah, akainzwa pamoyo; ndakamunzwa ogomerera seagadzikwa gomo. Kwandakandobaya kwaiva kutete. Ndakamufamba kwekanguva ndichibva ndamuchinja rutivi. Akarara akandifutiranerutivi ndokubva ndavhura mwena neshure. Apa ndipo pandakachinzwa kunakirwa. Yaiita seinosvetwa kana ndobudisa. Pakundoidzosa paya aibva andibata neruoko achindisundira mkati. Akatanga kubata ruoko rwangu achindipurudzira zvekuti shungu dzakandimomotera. Ndakatanga kumurova madeep uku ndinekaspeed kaya kekamba. Ndaisvika kumberi kwazvo kwaidziya kwakapfava seura. Akatanga kuridza kamhere kadiki diki. Ndaiti kana ndosundira mukati aibva afedemadza musana sedhayo achiti ahhhh! Ndakawedzera speed zvino ndoita zvehasha. Madam yakatanga kudaidzira zvaitonyangadza.
Ndakatanga kunzwa kuti nyeku nyeku kuzvigumwe zvekushoka ndikaziva kuti mutambo wava kuibva. Apa ndipo madam yainge yodana zita remurume wayo “Frank Frank Frank!” Ndakanyatso gadzirira engo yokuti ndigonyatsotundira mberi mkati chaimo. Nenguva duku ndakanzwa mai yowedzera kudziya ini sviriso yoita seyaiswa simbi ndiye hoi koi hoikoi ahhhhhhh tsaaaaa tsaaaa tsaaaa tsaaa tsa tsa tsaaa tsaaaa haa tsaa. Varume zvainaka. Patakapedza ndakangofpeka mutodo ndokusimuka ndondogara kunerimwe sofa iye ndokusara achipfeka. Hapana akataura neumwe. Kanguvane sahwira wangu akabva angoita seamuka ndokubva arovatrumpet chatunga chaicho. Akazvizadza mbatya dzose nepaaiva akavata. Haana kumbomuka kana kumboidza kudzuura asi kungorutsa chete achibowa.
Nhasi mkadzi wake anga achindisvoda too bad. Sahwira ndivo vatenga nhasi ndodii kana apamha?
Kusvira Mwana WaLandLord
Next story Kusvira Boss wangu kuGraft( another version)
Previous story Zvandakazoita nasisi vebasa madam vaenda kuchurch!